NetEnt ဂိမ်းဟာသူ့ရဲ့ 20 နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်နှင့် NetEnt ရော့ခ်စီးရီးအတွက်အချို့သောအသစ်နှင့်အင်္ဂါရပ်ကြွယ်ဝအွန်လိုင်းမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုမိတ်ဆက်. Guns N Roses gotahuge response from the players and now is the time to check out Jimi Hendrix, NetEnt ဂိမ်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအသစ်စက်စက် slot ကဂိမ်း.
ဒီအံ့သြစရာမိုဘိုင်း slot ကဂိမ်း 22 ခုနှစ်ဧပြီလအပေါ်ထုတ်သည်, 2016. ဒါဟာ 1960 မှာများစွာသောဂီတပညာရှင်ထံအပ်နှံ NetEnt အားဖြင့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့ဒဏ္ဍာရီဂီတပညာရှင်လူးစ Hendrix ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်. ဒီဂိမ်းကိုမျက်စိ-ဖမ်းဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ်, ဆုကြေးငွေ features နဲ့လူးစ Hendrix ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နောက်ခံသံစဉ်ဆွဲဆောင်. ဒီအကြောင်းကိုအချို့သောပိုပြီးအချက်အလက်များရှာဖွေတွေ့ရှိစို့ စိတ်ကူးငွေသားဖျော်ဖြေရေးဂိမ်း.
လူးစ Hendrix slot ပါက5ဖြစ်လိမ့်မည်×3 အတူရက်ကြောင့်မှားယွင်း slot ကဂိမ်း 20 fixed အလောင်းအစားလိုင်းများ. ဒီဂိမ်းကိုသင်မျိုးစုံအခမဲ့လှည့်ဖျား features တွေနှင့်အတူဆော့ကစားရန်စုံလင်သောပလက်ဖောင်းအားငါပေးမည်. ကစားသမားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏကိုအနိုင်ရဖို့အကောင်းဆုံး mode ကိုရွေးနိုင်ပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဂိမ်းထဲမှာကစားသမားအကျိုးစီးပွားခြီးမွှောကျဖို့ NetEnt အားဖြင့်မိတ်ဆက်နှစ်ခုအသစ်ဆုကြေးငွေ features တွေရှိပါတယ်.
ဒါကြောင့် 60 '' retro စတိုင်ဆောင်ပုဒ်တူကြောင့်ဆောင်ပုဒ်အထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်. Purple နှင့်ပန်းရောင်အရောင်နောက်ခံ, High-class ကို 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်လူးစ Hendrix ရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တေးသံများဒီဂိမ်းစူပါစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါစေ. The symbols are perfectly designed for the theme; သူတို့အဖြူဂစ်တာပါဝင်, အနီရောင်ဂစ်တာ, လူးစ Hendrix, ပန်းပွင့်, ငြိမ်းချမ်းရေးနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်စိတ်နှလုံးကို. ထိုသူအပေါင်းတို့သည် High-value ကိုသင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်, သငျသညျအခြို့သောကြီးမားသောခရက်ဒစ်အနိုင်ရမှတစ်ခုချင်းစီကိုလှည့်ဖျားနေစဉ်အတွင်းဆင်းသက်ရ.
အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးဆုကြေးငွေ features တွေ:
လူးစ Hendrix slot ကဂိမ်းအတွက်အခမဲ့လှည့်ဖျား feature ကိုဆုကြေးငွေဘီး Guns ၏အင်္ဂါရပ် N က Roses ဖို့အတော်လေးဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်. သင့်ကိုငါအပ်အခမဲ့လှည့်ဖျား features တွေကိုအောက်တွင်မဆိုရစေခြင်းငှါ:
Crosstown ယာဉ်အသွားအလာ: ဂိမ်းဖြင့်သင်တို့ကိုဆုချပါလိမ့်မယ်6ကြီးမားတဲ့ကိုအနိုင်ပေးတချို့ Wild နှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
Little ကတောင်ပံ: မြေယာ3သူတို့ကိုထိုအရပ်၌သင်တို့၏အခမဲ့လှည့်ခြင်းများနှင့်အတူလိုက်. သငျသညျရနိုငျ6သို့ 12 သူတို့ထဲက.
နီမောင်းသောမြူ: အဆိုပါကစားသမားရရှိမည်6သို့ 12 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးတစ်ခုချင်းစီလှည့်ဖျားရှိနီမောင်းသောမီးခိုးမြူ Wild ရှိလိမ့်မည်.
အကြွေစေ့ဆုချီးမြှင့်: သငျသညျဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်း, သငျသညျအခြို့သောကျပန်းတိုးပွားစေဘို့၌ရှိကြ၏. သူတို့ထဲကတချို့က 30x ကဲ့သို့ကြီးမားသောရှိနိုင်ပါသည်.
ရိုင်းသင်္ကေတဆိုရက်ကြောင့်မှားယွင်းအတွက်ကြောင့်နိုင်တစ်ချိန်ကဆင်းသက်နိုင်, ကရိုင်းသောသင်္ကေတနှင့်အတူအားလုံးကျန်ရှိနေသေးသောသင်္ကေတများအစားထိုးနိုင်. အကျိုးဆက်, ကစားသမားတစ်ဦးပိုကြီးအနိုင်ရဘို့ပိုကောင်းတဲ့စံချိန် sequence ကိုရရှိသွားတဲ့. ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းဟာလှည့်ကွက်ရှိပါတယ်. ဤသို့အချို့ကိုသင်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းများအနိုင်ရနိုငျသောကွောငျ့လေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအနီရောင်ဂစ်တာလေယာဉ်ဆင်းသက်အတော်လေးအေးမြစေနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ stacked ဂစ်တာလည်မည်ရက်ကြောင့်မှားယွင်း၏စေးကပ်နှင့်အခြားသင်္ကေတများဖြစ်လာလိမ့်မည်. သငျသညျဒီဂိမ်းရဲ့အစွမ်းကုန်ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရသင်္ကေတ၏ပိုကောင်းတဲ့ sequence ကိုရနိုင်.
ဒါဟာတစ်သီအိုရီ RTP ရှိပါတယ် 96.1%. ဂိမ်းကစားအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောစပွေီးမှနဲ့အတူ, ကစားသမားကြီးထွားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားစောင့်ရှောက်နိုင်. ကျောက်စီးရီးပြီးသားတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်းကိုအပ်လိုက်ပါတယ်, Guns N Roses. ထိုအလူးစ Hendrix ပိုကြီးပိုကောင်းဖြစ်သွား !